DF oo diiday wakiilka AU soo macaabeen ee John Mahama | KEYDMEDIA ONLINE
DF oo diiday wakiilka AU soo macaabeen ee John Mahama
Dowladda Fadaraalka Soomaaliya, ayaa warqad ay u dirtay Midowga Afrika, waxay ku diiday in John Mahama uu ka howl galo dalka Soomaaliya.
MUQDISHO, Soomaaliya – Ilo loo qaateen ah, ayaa Keydmedia Online u xaqiijinaya jirataanka waraaq ay Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya u dirtay Midowga Afrika, taas oo ay ku diiday danjiraha maalmo ka hor loo magacaabay Ergayga gaarka ah ee Midowga Afrika u qaabilsan Soomaaliya ee John Mahama.
Dowladda Soomaaliya, ayaa diidmada diblumaasigaan u cuskatay in John Mahama, uu xariir dhaw la leeyahay Madaxda dalka Kenya, kuwaas oo arrimo gaar ah ay isu hayaan Madaxweynaha waqtigu ka dhamaaday ee Soomaaliya Farmaajo.
Wasaaradda Arrimaha Dibadda waxa ay sheegtay in aan lagala tashan magacaabidda Ergeygaan, isla markaana aan la marin, nidaamka Diblumaasiyadda iyo sharuucda u yaalla Midowga Afrika.
Madaxweynihii hore ee Ghana, ayaa horey looga eryay dalka Sierra Leone, isagoo hoggaan u ahaa Guddi ka socday Kormeryaasha Doorashooyinka ee Ururka Barwaaqo-Sooranka, waxaana lagu eedeeyay inuu faragalin taban ku sameeyay doorashooyinka dalkaas.
Guddoomiyaha Ururka Midowga Afrika (AU) Moussa Faki Mahamat, ayaa labo maalin ka hor, Madaxweynihii hore ee Ghana, John Dramani Mahama, ku dhawaaqay inuu noqonayo Wakiilka Sare ee Soomaaliya u gaabilsan Midowga Afrika.
Waxaa xusid mudan in John Mahama uusan wali soo gaarin dalka, Warka Wasaaradda Arrimaha Dibadda Soomaaliya, ayaana la filayaa in dhawaan si buuxda loo shaaciyo, laguna baahiyo Warbaahinta Dowladda.